Amazon Naarta HD 10 dib u eegis: jarida geesood qaldan daliil qalad qaali - Rule News
The Amazon Naarta HD 10 ma aha kiniin wanaagsan oo aanu ku nool yihiin ma ay heerka dhigay madaxdii iyo Amazon ee hardware kale.
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Amazon Naarta HD 10 dib u eegis: jarida geesood qaldan daliil qalad qaali” waxaa qoray Samuel Gibbs, u theguardian.com on November 6-deedii Friday 2015 07.00 UTC
HD Naarbaa 10 waa Amazon ee kiniin-xajmi buuxa ugu dambeeyey, laakiin waxa ay dhimaysa geesood aad u tiro badan oo aan raqiis ah.
Kiniiniyada Naarta Amazon ee ayaa waxaa ku dhacay iyo seegi afartii sano ee lasoo dhaafay. Waxay bixiyaan screen hufan, tilmaamaha gaarka u macquul ah iyo is-dhexgalka dhagan galay Amazon ee deegaanka ee filimada, Bandhigyada TV, music, buugaagta iyo Chine oo qiimo jaban ah in undercuts dhow wax walba oo kale. HD Naarbaa 10 isku dayo inuu ku sii arrimuhu in.
Adeegayaa ay ka baxsan
Dib The oo kiniin ah waa caag ah oo dhalaalaya in diiro faraha iyo xagashada si fudud. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Qorshahaa waxa ka mid ah HD Naar 10 waa mid aad u adeegayaa. Daboolay jilicsan, caag dhalaalaya in aan u suurtagashay in ay u xusaan ilbiriqsi ah waxaa ka baxa sanduuqa gudahood, waxa ay u muuqataa mid raqiis ah.
Amazon dhigay heshiis weyn oo ku saabsan kiniin la raagaya iyo badbaaday 200 jeedsadaa isagoo tijaabada sumacdii ee shirkadda marka loo eego iPad Air 2'S 30. Waan ku hoos dhawr jeer gal rooga aan u jabiyay, laakiinse ma ka soo baxday inay isku dayaan oo soo baabbi'i. Waxa uu dareensan yahay si fiican isugu wada, laakiin jidhku waa ka sii badan tahay wax aan dabacsan waxaana la filayay inay.
The badhamada iyo dekedaha oo dhan Jilib ku laayeen sare, taas oo macnaheedu yahay mid aad gacanta ku daboolaa badhamada mugga iyo headphones dekedda ama button xoog iyo dekedda microUSB markii lagu qabtay si ay u daawadaan video.
At 7.7mm qaro waa yaab khafiif loox-dhamaadka yar yahay a. Waxa kale oo uu leeyahay bezels xad is haysta ku dhowaad widescreen ku 10.1in, taas oo ka dhigaysa waxay dareemaan cidhiidhi ah, laakiin muddo dheer loox. At 432g ma aha mid aad u culus si uu u qabto for a 40 daqiiqadii TV show, laakiin waxaan arkay aniga oo raadinaya meel ay u kobciyo marka la isku dayayo in la dhammeeyo a 2.5 saac movie.
The dhista iyo jirka waa OK. Screen waa ha ugu weyn ee hoos u ah oo dhan. Waxaa 10.1in la xallinta 720p iyo cufnaanta pixel hoose ee 149 pixels per inch. Wixii la barbardhigo kiniiniyada ugu leeyihiin ugu yaraan 200ppi. Amazon ee hore waaweyn Naarta HD, HD ah 8.9, lahaa screen 1080p la 254ppi ah.
Screen ma aha fiiqan, taas oo ka dhigaysa text, astaanta iyo sawirada eegi ka yar tegayo. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Ma uusan badan video laha, taas oo u muuqdo in lamari, iyadoo celcelis ahaan midabka iyo xaglaha daawashada wanaagsan, laakiin qoraalka, walxood, sawiro iyo waxyaabo kale ma guurto ah ka fiiri dareemi pixelated.
Waxaa si gaar ah cad marka aad isku daydo in uu akhriyo buug ku yaal, taas oo u eg wax ka shan sano ka hor. Inkastoo Amazon ee Bookerly typeface caawisaa - wareegaya Helvetica ka hadlaysaa dhibaatada - Waxaan helay iyadoo ay adag tahay in la akhriyo muddo kordhin kale qoraalka ahaa kaliya ma tegayo filan baaxadda yar oo aan caadiyan la akhriyi lahaa.
Ayaa ku hadla rikoor dhinaca kiniinka ahaayeen lama filaan ah oo wanaagsan oo cod weyn ku hadla kiniin. Weli ma ku filan si ay u isticmaalaan sida ciyaaryahan music heegan ah, laakiin ganaax daawashada video ah halka lagu karsado.
Processor: MediaTek Bawdada-muhiimka ah (1.5GHz dual-muhiimka ah + 1.2GHz dual-muhiimka ah)
Kaydinta: 16 ama 32GB; Waxa kale oo laga heli karaa booska microSD
Camera: 5Xildhibaan camera gadaal, 0.3Xildhibaan camera hore jeeda
Cabirka: 159 x 262 x 7.7mm
Hardware tabar yar keenaysaa in waayo-aragnimo saboolka ah
A booska card microSD waa mid ka mid ah qodobbada soo daray tiro yar oo u HD Naar 10, kuu oggolaadaan in aad ku darto kaydinta si fudud. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
HD Naarbaa 10.1 ayaa Bawdada-muhiimka ah MediaTek processor iyo 1GB ee RAM, taas oo aan ilaa hawsha ciiyaarta looxa. Waxyaalaha qaarkood ganaax ku orday, laakiin dhab ahaantii iyaga bilaabay ama bedelaan hawlaha kala duwan ayaa waxaa ku warameen dad Artur dheer oo ku filan si ay u sameeyaan waxaad la Yaabteen in kiniinka ayaa ku burburtay.
Marka kaniiniga ugu horeeya bilaabo ilaa ay u hawlgasho ganaax. Loading video ugu horeysay ka Amazon ee Ra'iisul Instant Video sidoo kale ka shaqeeya ganaax. Laakiin waa marka aad bilowdo in aad ku shuban labaad, ama loo baddasho app kale oo wax bilaabaan in ay creak.
Video loo maqli karo mararka qaarkood waxay noqon kartaa siman, laakiin inta badan ka maqnaan doono loox oo istaa-. Kabacdi guud ahaan homescreen ayaa sidoo kale si xun u Hadhi waayeen, halka ku rakibidda apps keenay kiniinka si gurguurto ah.
kulan garaaf degdeg ah sida Racing Real 3 ahaayeen shiidaa tirinayay, halka xitaa Monument Valley .Weli waqti ka waqti.
batari ayaa socday ku dhawaad ​​toddoba saacadood ah loo maqli karo video. Arrinta ugu weyn ee nolosha batteriga waa in shaashadda ma leedahay shidma iftiinka daarmayaay'e iyo ma qabsato Nuurkii si toos ah, taas oo macnaheedu yahay waxa ay inta badan aad u dhalaalaya ama aad u caajis.
Xukun weligiis qaaday. Waxay qaadatay shan saacadood in ay si buuxda ka qaadaan HD Naarta 10. Kiniiniyada intooda badan ka qaadaan in laba ilaa saddex saacadood.
Soo dhoweynta Wi-Fi sidoo kale waxay ahayd mid liidata. In meelaha la mid ah in a Google Nexus 6p ama iPad Air 2 qaado lahaa a signal xoog Wi-Fi, ku dhawaad ​​12 milyan ka soo router, HD Naar 10 dhibtoon lahaa. Xawaare Download ee Chine iyo video sidoo kale waxay ahaayeen kuwo aad gaabis ah. Isku xidhka ugu internet inay router ma hal cunsur oo yareysey ahaa.
Dabka OS 5 waa talaabo kor hore nidaamyada hawlgalka Amazon. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
HD Naarbaa 10 la Timaadda Amazon ee version dambeeyay Naarta OS 5, taas oo ku salaysan yahay Android ee sannadkii hore 5 Hurdiga ah. A app Roobka yaqaan waxaa laga heli karaa homescreen ah, laakiin kabacdi xaq ah in ay kala dhex qaybaha bidix iyo.
Kabacdi guud ahaan buugaagta, tusaale ahaan, bandhigayaa buugaag aad soo iibsan ugu sareysa, talooyin buugaag bilaash ah haddii aad leedahay Amazon Ra'iisul ama shidin Unlimited oo markaas talooyin dheeraad ah oo ku saleysan taariikhda aad gadashada. La mid ah video, kulan, Chine, music, buugaag, newsstand iyo shopping Amazon.
Bidix ugu screen muujinaysaa waxyaabaha dhawaan loo isticmaalo ama daawaday, taas oo ah jidka ugu dhakhsaha badan ee dib u gelayno content.
Waxay si fiican u shaqaynayaan, oo ka dhigaysa ugu fiican oo kiniin ah isticmaalka ku salaysan. Waa software ah kiniin hore waxaan soo arkay in ay si weyn u gudbay app ku xirneeyn qeybiyaha caadiga ah iyo muran la'aan waa waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan HD Naar 10.
Inta kale ee software kuma aha sida wanaagsan. Weerar dadban ku dusheeda hoos uga si ay u arkaan farriimaha iyo waxa u eg set oo ah toggles degdeg ah u Wi-Fi, Bluetooth, warejin screen, ma dhibayo iyo kuwa kale. Laakiin dhab ahaantii inta badan waa uun tuuryo u screens goobaha, ma toggles, taas oo niyad jab.
Mid ka mid ah xisaab Amazon waa in la diiwaan-galiyay in kiniinka, laakiin user profiles badan oo ay ku jiraan profiles carruurta waxay noqon kartaa mid ah Mudanayaasha, waxa wanaagsan loox oo qoyska ka mid ah.
OS Naarta ordi doonaan barnaamijyadooda badan Android, laakiin kaliya uu heli karo app dukaanka Amazon. Waxay leedahay xulashada sii kordhaysa oo Chine, oo ay ku jiraan bixisay-u-ada laga heli karaa lacag la'aan ah ku hoos Ra'iisul "dhulka hoostiisa" dhiirrigelinta Amazon ee, laakiin ma aha sida ballaaran sida Google Play iyo ma laha oo dhan barnaamijyadooda ugu dambeeyey iyo ciyaaraha.
The camera gadaal shan megapixel oo hore u jeeda VGA camera muuhiyey yihiin dadka saboolka ah. Waxay qabsadaan arag darnaayeen, daymada, images kharibi ka maqan si faahfaahsan.
Lockscreen soo bandhigayaa xayaysiisyada ilaa aad ka bixiso £ dheeraad ah 10 si loo saaro 'dalabyo gaar ah'. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The 16GB Amazon Naarta HD 10 la xayaysiisyada shaashadda qufulka waa £ 170 madow ama caddaan. The version 32GB waa £ 200, halka ay ka saareen xayaysiisyada kharashka £ 10.
Samsung ayaa 9.7in la mid ah Galaxy Tab A waa £ 179, halka fog ka xoogbadan 8Oo Galaxy Tab S2 waa £ 240 ka Amazon la 32GB ee kaydinta. Apple ee iPad jaban waa £ 219. Tesco ee Hudl 2 kacaysaa £ 99, iyo dhowr ka mid ah kiniiniyada-dhamaadka sare ee sannadkii hore ayaa laga heli karaa lacag dhan £ 200.
The Fire OS cusub 5 waxa uu leeyahay qaar ka mid ah fikradaha wanaagsan iyo waa tallaabo ka qoraalkii hore ee nidaamka qalliinka ah. Amazon dhiman-hards jeclaan doono is-dhexgalka ee filimada ee shirkadda, TV, buugaagta iyo adeegyada kale.
Laakiin shaashadda 10Oo waa uun ma qaraarkan oo sare oo ku filan si ay u sameeyaan ugu adeegyada Amazon ee, processor ma aha awood ku filan in uu ordo kulan garaaf degdeg ah oo ku dambaysaa la xitaa hawlaha fudud.
Dhibaatada ugu weyn ee la HD Naar 10 waa in aysan raqiis ah. Haddii ay ahayd £ 100, inta badan qabsoomi waayeen cafiyo, laakiin £ 170, waxaa jira wax badan oo kiniin ah ku tartamaya in ay bixiyaan waayo aragnimo fiican.
Iidooyinka: dhexgalka weyn Amazon, badbaaday a dhibcood yar oo aan la jabiyay, booska kaarka microSD
Arrrimaha: screen xal u hooseeya, processor gaabis ah, qaab laggy, daciif ah Wi-Fi, aan si toos ah sixitaanka dhalaalka, kamaradaha saboolka ah, xukun aad u gaabis ah
Tesco Hudl 2 dib u eegis: badan oo kiniin ah ee lacagta
Dib u eegista kiniin Amazon Naarta HD Kids Edition
Amazon.com, Android, Qodobka, Qalab, dab ugu shidin, Dib u eegida, Samuel Gibbs, kombiyuutarada Tablet, Technology
← Sidee gumeysato Mars Shan Mars daahfurtay in loo bedelay fahamka caalamka cas oo naga →